ဘဝမှတ်တိုင်: Mobile ODIN Pro [root] v4.20 APK နှင့်အသုံးပြုနည်း
Mobile ODIN Pro [root] v4.20 APK နှင့်အသုံးပြုနည်း
Mobile Odin Pro v4.20 APK ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိဖုန်းမှာ Official Firmware တင်မယ် CWM Recovery သွင်းမယ်။သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးFirmware တင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဖုန်းဟာRoot ကိုအလွယ်တကူလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့Mobile Odinဆိုတဲ့ Application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မိမိဖုန်းဟာ Root လုပ်ပြီးသားတော့ဖြစ်ရပါမယ်။ပြီးတော့ မိမိဖုန်းဟာ Android O/S : 2.2 နှင့်အထက်ရှိရပါမယ်။မိမိမှာကွန်ပျုတာမရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ဖုန်းနဲ့ပဲ Firmware ကိုဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲမှာပဲFirmware ကိုအလွယ်တကူလေးတင်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Note 10.1" Wi-Fi GT-N8010/N8013
မှတ်ချတ်—– အခုနောက်ဆုံး Samsung Galaxy S4 ကိုပါအထောက်အပံ့ပေးထားတယ်လိုသိရပါတယ်ခင်ဗျ။
After flashing official firmware, you will only get SuperSU. You may need to flashaseparate CF-Root kernel to gain CWM Recovery and CWM Manager. You can flash CF-Root using Mobile ODIN like me :)(မိုဘိုင်းအိုဒင်းန် ကိုအသုံးပြုပြီး Firmware Flash လုပ်ပါက Root ကို Auto(Super Su) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး .CWM Recovery ကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင် Mobile Odin ကိုအသုံးပြုပြီးတင်နိူင်ပါသည်)၀င်းလှိုင်(နည်းပညာ)
Cwm Recovery ဟာ .tar ဖိုင်ဖြစ်ရပါမယ်။ဖိုင်မှန်ပြီဆိုလျှင်တော့ mobile odin pro ကိုဖွင့်ပြီးလျှင် Kernel ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီး CWM Recovery .tar ဖိုင်လေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Flash Firmware ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းကAuto Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာပါလိမ်. မယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့။ မိမိဖုန်းကို vol up+home+power ကိုနှိပ်ပြီး Recovery Mode ကိုဝင်ပြီးစစ်လိုက်ပါ။ Custom CWM Recovery လေးသွင်းပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/04/2014 05:27:00 pm